विश्वकै पहिलो ट्याटुयुक्त कार बन्यो लेक्ससको कार | Automotive News Nepal
विश्वकै पहिलो ट्याटुयुक्त कार बन्यो लेक्ससको कार ७ चैत, २०७६
के कारमा ट्याटु कोर्न सकिन्छ ? अवश्य पनि सकिदैन ।
मानिसको छाला जस्तो नरम र प्वाल पार्न सकिने पदार्थ कारमा नहुने भएकाले यसमा ट्याटु बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ । तर कार निर्माता कम्पनी लेक्सस र अनुभवी ट्याटु कलाकार क्लाउडिया डी सेबले यस कुरालाई सम्भव बनाएका छन् ।
यसका लागि ६ महिनाको प्रोजेक्ट तयार गरिएको थियो । यस अन्तर्गत सातामा ५ दिन दैनिक रुपमा ८ घण्टा काम गर्नुपरेको थियो । यसको नतिजा स्वरुप लेक्ससले ‘विश्वकै पहिलो ट्याटुयुक्त कार’ निर्माण गर्न सफल भएको छ ।
ट्याटुका लागि प्रयोग गरिने निडलको सट्टा क्लाउडियाले ड्रमेल ड्रिल भनिने पदार्थ प्रयोग गरेकी थिइन् । यसका लागि उच्च गुणस्तरीय पेन्टको पाँच लेयर प्रयोग गरिएको छ । त्यसपछि गोल्ड लिफ डिटेल र अन्त्यमा प्रोटेक्टिभ लेयरको प्रयोग गरिएको छ ।
यी सबै कार्यका लागि १ लाख २० हजार पाउन्ड खर्च भएको छ । कारको मूल्य भन्दा पनि ट्याटुको मूल्य महंगो ? हो, कारको प्रारम्भिक मूल्य भन्दा ट्याटुको मूल्य महंगो छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा एयर बङ्लाको विमान दुर्घटना
काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा एयर बङ्लाको विमान र...
सडक विभागले गरेको एक अध्ययनले देशभरका सडकहरूमध्ये चारवटा सडकखण्डमा धेरै दुर्घटना...
यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना
भैरहवा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो । दुर्घटनाव...